Xafiiska Puntland – Page 44
AKHRISO:- Shirkadda Spectrum oo ku dhawaaqday hadal ka nixiyay Kenya “Cadaymo lasoo bandhigay”.
Shirkadda Spectrum oo sameysay sahminta shidaalka xeebaha Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay waxay faah-faahin uga bixisay shirkii 7-dii Febraayo ka dhacay London iyo dhulka sahminta lagu sameeyey. Qoraalka oo loo diray wasaaradda batroolka Soomaaliya,
Xildhibaanada Kenya oo saakay ku dhagan Uhuru Kenyatta “Dood ka dhalatay lahaanshaha Badda la isku hayo”.
Xildhibaanada Baarlamaanka dowladda Kenya ayaa maanta waxaa ay u yeereen Wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi haweenayda lagu magacaabo Moniko Juma. Kulanka Baarlamaanka Kenya ayaa waxaa su’aalo lagu weydiin doonaa wasiirka arimaha dibada Kenya, kaasi oo ku
XOG:- Puntland oo Albaabada isugu laabtay Xafiis xisbiga CCWarsame kulahaa Garoowe “Sabab yaab leh”.
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya magaalada Garoowe ee Caasimadda Puntland waxaa albaabada la isugu laabay xafiis xisbiga Wadajir uu ku leeyahay magaaladaasi. Ciidamada amaanka ee Maamulka Puntland ayaa la soo sheegaya in albaabada
Daawo:- Madaxwayne Farmaajo oo si aan Horay loo arag maanta loogu soo dhaweeyay dalka Brundi ‘Ujeedka Safarka”.
February 18, 2019 Xafiiska Puntland 1
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray dalka Burundi, waxaana garoonka diyaaradaha Bujumbuura kusoo dhaweeyay dhiggiisa dalkaas Mudane Pierre Nkurunziza. Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynaha dalka Burundi Mudane Pierre
Deg-Deg:- Qareen Kenyaan ah oo runta usheegay Uhuru Kenyatta “Dagaalka aad iclaamisay waa Boob”.
February 18, 2019 Xafiiska Puntland 0
Qareen Kenyan haysta dhalashadda dalka Kanada oo lagu magacaabo Miguna Miguna ayaa sheegay inuusan Madaxweyne Uhuru Kenyatta xaq u lahayn inuu iclaamiyo dagaal ka dhan ah Somalia sababo la xiriirta khilaafka dhinaca Xuduud-baddeedka ee labada
Daawo:- Wariyaasha Muqdisho oo cabasho ka ah xubno ka shaqeeya Xafiisyada RW iyo kan Madaxwaynaha “Jajuub baa jira”.
Qaar kamid ah wariyaasha wararka doona ee ka howlgala warbaahinta Muqdisho ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen hab dhaqanka Xubnaha warfaafinta uqaabilsan xafiisyada Madaxwaynaha iyo R/wasaaraha. Wariyaashaan ayaa waxay sheegeen in Xubnahaasi ay caado ka
Daawo:- Kenya waxay qaadatay goaano dunida ay la yaabtay “maxay samaysay 24kii saac ee lasoo dhaafay?”.
Wali taariikhda Soomaaliya kama aysan dhicin in Kenya ay sidaan ula dhaqanto Dowladda ka jirta Soomaaliya bur-burkii kadib iyo ka hor intuba, Goodinta iyo caga juglaynta kenya ayaa ka sii daraysa waxaana Xafiisyada dalkaasi ka
XOG:- Ujeedaka Safarka Farmaajo ee Brundi oo la ogaaday inuu yahay xalinta walwal haysta madaxwaynaha dalkaasi.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u ambabaxay dalka Burundi, kadib casuumaad uu ka helay dhigiisa dalkaasi. Madaxweynaha ayaa magaalada Bujumbura ee dalka Burundi kula kulmaya madaxweynaha dalkaasi, waxaana
AKHRISO:- Xasan Sheikh oo qoraal talo u ah DFS kusoo qoray Bartiisa Facebook.
February 18, 2019 Xafiiska Puntland 4
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoraal uu soo dhigay facebook uga hadlay xiisadda diblomaasiyeed ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya, kadib go’aankii kasoo baxay Kenya. Xasan Sheekh ayaa sidoo kale qoraalkiisa uga
Puntland:-Seddex sano shaqaale dowladeed oo aan wax mushaar ah qaadan “Sababta?”.
Xil wareejinta oo ay goobjoog ka ahaayeen Guddi Madaxweyne Deni magacaabay, Agaasimayaasha Wasaaradda iyo shaqaalaha xarunta dhexe ayaa Wasiir Cuuke ku wareejiyay Wasiirka cusub lacag deyn ah oo ka maqan qaar kamid shaqaalaha. Wasiirkii hore
CCWarsame oo markii ugu horreysay taageeray goaanka DFS ay ka qaadatay khilaafka Kenya
Xisbiga Wadajir ee uu hoggaamiyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ayaa war kasoo saaray jawaabta dowladda Soomaaliya ay ka bixisay go’aankii dowladda Kenya ka qaadatay Shirkii dhawaan ka dhacay magaalada London. Xisbiga ayaa qoraalkooda ku taageeray go’aanka
Deg-deg:- Madaxwayne Farmaajo oo safar aan la filayn ugu amba baxay dal deris la ah Kenya.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Burundi. Madaxweynaha ayaa la sheegay inuu marti qaad ka heley dhiggiisa Pierre Nkurunziza. Lama ogo iney tani isku soo dhaweyn karto cilaaqaadka
Farmaajo iyo Tarsan oo kulan gaar ah ku yeeshay Villa Somalia “Xogo hoose oo la helayo”.
Safiirka Dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa qaabilay Safiirka oo dib shalay ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, kadib markii Kenya ay
Daawo:- Madaxwayne Deni oo si toos ah ugu jawaabay siyaasiyiinta Mucaaradka.
Madaxweynaha dowladda Puntland oo maanta qado-sharaf Garoowe ugu sameeyay mas’uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda ayaa jawaab dadban siiyay siyaasiyiinta dhaliilsan xukuumaddiisa cusub ee aan weli shaqa-bilaabin. Madaxweynaha oo hadal ka jeediyay munaasabadda ayaa sheegay in
Daawo Degdeg:- Hogaamiyaha Mucaaradka Kenya oo taageeray Goaanka DFS “Kenya way gardaran tahay”.
Hoggaamiyaha xisbiga ANC kana mid ah madaxda sar sare ee urur weynaha mucaaradka Nasa , Musalia Mudavadi ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay qaaddo tallaabo degdeg ah oo ay wax uga qabaneyso muranka dhanka dibloomaasiyadeed
Deg-deg:- Ciidamada Kenya oo udiyaar garoobaya inay kabaxaan Somalia “Saamaynta go’aankii DFS”.
Ergeygii hore ee gaarka ahaa ee Soomaaliya ee QM, Abuukar Armaan ayaa ka hadlay waxa xiisadda cusub ee Soomaaliya iyo Kenya ay uga dhigan tahay joogitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa sabtidii xiriirka
Xog Cusub:- Soddon kamid ah shaqaalaha DFS oo mushaarkii laga jaray “Arag Document Caddeyn ah”.
Shaqaale ka tirsan wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya ayaa mushaharka laga joojiyey muddo bil, oo ah bisha Febraayo 2019, sida ku cad warqad Warbaahinta ay heshay. Shaqaalahan oo gaaraya illaa 30, ayaa waxaa lagu eedeeyey